Mulkiilaha Leicester City oo diyaarad Helikobter ah shil ku galay - BBC News Somali
Mulkiilaha Leicester City oo diyaarad Helikobter ah shil ku galay
28 Oktoobar 2018
Vichai Srivaddhanaprabha diyaaradda Helicopter-ka ee uu lahaa waxay la soo dhacday waxyar un kaddib markii ay ka duushay garoonka xilli ay dhammaatay ciyaarta premier league ee ka socotay King Power Stadium.
Dad aad ugu dhaw qoyska Vichai waxay BBC-da u xaqiijiyeen diyaaraddaHelikobter-ka ee soo dhacday inuu saarnaa.
Nin shilka diyaaradda arkayeyna wuxuu sheegay inuu arkay Kasper Schmeichel oo u ciyaara kooxda Leicester City oo ku sii ordaya halka ay Vichai diyaaradda kula dhacday.
Balse weli lama ogaan diyaaradda inta qof ee saarneyd iyo sida ay wax u gaareen.
Ciyaarti dhex martay Leicester City iyo West Ham United ee ka socotay King Power Stadium waxay ku dhammaatay barbarro 1-1.
Maamulka Kooxda Leicester oo booliska iyo shaqaalaha gurmadka caawinaya waxay sheegeen in ay shilka diyradeed faahfaahin dheeraad ah ay ka soo saari doonaan.
Mr Srivaddhanaprabh inta uu kooxda Leicester City uu mulkiyey waxay kooxdu hantiday Koobka Premiere League sanadkii 2016-ka.
Taageerayaasha Leicester City oo ubax dhigaya garoonka King Power Stadium
Wariye garoonka uga soo warramayey telefishiinka Sky Sports News Rob Dorsett , wuxuu sheegay diyaaradda markay kacday iyo markay soo dhacday inuu wakhti badan u dhaxeyn, qaabka ay u soo dhacdayna ay u ekeyd inuu duuliyaha diyaaradda uu xakameyn waayey oo ay cillad la soo deristay.
Mulkiilaha Leicester City wuxuu kooxdu iibsaday 2010-ka
Leo Bruka wuxuu Telefishiinka 5 Live uu u sheegay inuu arkayey diyaardda oo ku soo dhacday meel gawaarida la dhigto iyo qarax weyna uu ka dhacay halki ay diyaaradda ku dhacday.
Taageerayaal Leicester City oo tira badan ayaa ku soo uruuray garoonkooda King Power Stadium iyaga oo dhigayey ubaxyo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin shilka diyaaradeed ee ku dhacay mulkiilaha kooxda Vichai Srivaddhanaprabha.
Ubax dhigga Garoonka King Power Stadium ka socda
Xigashada Sawirka, Pete White
Diyaaradda burburtay oo garoonka dhexdiisa ka duuleyso
Witness John Butcher: "The helicopter just span"
Wa kuma Vichai Srivaddhanaprabha?
Xigashada Sawirka, Leicester City Football Club
Waa abbe afar carruur ah dhalay
Waa maal qabeen bilyan dheer ah isla markaana aasaasaha shirkadda King Power International
Wargeyska Forbes Magazine wuxuu Vichai uu ku tilmaamay inuu kalinta shanaad uu ka galayo liiska maalqabeennada dalkaasi Thailand
Kooxda Leicester City sanadki 2010-kii wuxuu ku iibsaday 39 milyan oo gini.
Inta uu Vichai Kooxda Leicester City uu iibsaday waxay kooxdu hanatay koobka Premier League 2016-ka.
Waa kuma Safiirka cusub ee Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya?
Gabadh indhaha naafo ka ah oo kaalinta koowaad ka gashay Imtixaanka Dudiga Dhexe
Shiirkole maxaad ka taqaannaa?
Haweeneyda u istaagtay in bulshadeeda ay ka difaacdo burcadda hubeysan
"Waa inaan khilaafka siyaasadeed loo rarin qabaa’ilka iyo hay’adaha dowladda"